Android -x86 4.4 ine vhezheni itsva | Linux Vakapindwa muropa
Android -x86 4.4 ine vhezheni itsva
Isu tatova neiyo nyowani vhezheni yeApple-x86 4.4, ine chinokwezva chikuru cheLinux Kernel kugadzirisa uye iyo Uefi Bios kuenderana
Android-x86 4.4, chiteshi cheiyo Android inoshanda sisitimu yakashandurwa kudesktop PC ine vhezheni itsva, kunyanya iyo r4 vhezheni, iyo yave kuwanikwa kurodha pasi.
Chinhu chinokwezva nezve Android-x86 4.4 ndechekuti inokwanisa kupa ese maficha eiyo Android 4.4 Kit Kat mudziyo asi paPC, nenzira yakafanana kune vamwe maemulator emu Android seBluestacks, asi nemusiyano wekuti ichi hachisi emulator, asi pachinzvimbo chayo chayo chekushandisa pamwe nemadhiraivha ayo uye yayo Linux kernel.
Kana zviri zvitsva mu = Android-x86 4.4, ine rutsigiro rweinowanzo kupokana UEFI BIOS. Kana iri yeKernel, yakagadziridzwa kuita vhezheni 4.0.9 uye pakupedzisira tinogona kuratidza kuvandudzwa kwevatyairi veMesa 10.5.9, sezvo yaitadza mune mamwe maGPU.
Iyi vhezheni inoshanda chaizvo mushe, nekuti inokwanisa kumhanyisa iko kweiyo Android 4.4. Kit Kat nemabasa ayo ese, asi kuve zvirinani zvirinani kugadziridzwa kune iyo yakajairwa PC pane emulator iyo inowanzo kupa akawanda akawanda zvikanganiso. Kubatsira kwekuva nekuparadzirwa kwakadai kugona kuyedza maapplication eAroid kana kugona kutamba mitambo yakasarudzika yeApple, asi izvo zvinoda zvakawandisa zvidiki zvinodiwa nenharembozha diki.
Pamusoro pezvese izvi, ino inoshanda system ine iyo yekuwedzera iyo inogona kutakurwa pane Live CD, yatichakwanisa kuyedza pane chero komputa pasina kuita chero rudzi rwekuisa kana kuchinjisa.
Zvirokwazvo iyi vhezheni ndeyekupedzisira kweiyo 4.4 nhevedzano, kubvira iyi vhezheni yava kupera kushanda, saka ivo vachatarisa zvakanyanya pane Android vhezheni 5.0 na6.0, ayo ari epamberi pari zvino.
Kana iwe uchida kuitora, tora iyi link, maunogona kurodha pasi mufananidzo weIO yeiyi vhezheni. Kana iwe uchida imwe vhezheni ye Android-x86 senge iyo 5.1 version, heino runyorwa rwevose Android x86 shanduro dzakaburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Android -x86 4.4 ine vhezheni itsva
Maitiro ekukwiridzira kune Debian 8.3 kubva kuDebian 8.2